Nubia Z20 ga-eweta na August 8 na eze | Gam akporosis
Nubia Z20 enweela ụbọchị ngosi ngosi
Izu ole na ole gara aga, anyị nụrụ banyere Nubia Z20 maka oge mbụ, ebe ọ bụ na akara ndị China jiri ekwentị a were see chi jiri n’ehihie. N'oge ahụ, ekwuru na ngwaọrụ a ga-ada n'ahịa n'oge na-adịghị anya. N’agbanyeghi na enyeghi ubochi maka ya, ihe mechara gbanwee. Anyị nwere ụbọchị ngosi.
Nubia Z20 a bụ ekwentị akpọrọ ka ọ weghara n’aka Nubia Z18 n’ahịa. Ọ na-anọchitekwa itu ukwu maka aha maka akara na mpaghara a, mana nke ahụ kwere nkwa ịhapụ anyị ekwentị nwere mmasị. Filbọchị ịgba akwụkwọ gị bụ ọrụ na enwere ụfọdụ nkọwa gbasara ya.
Ngosipụta gọọmentị nke Nubia Z20 ga-eme na August 8. Otu ụbọchị mgbe ngosi nke Samsung Galaxy Note 10 anyị ga-enwe ike izute ekwentị a site na ika China. Ọ bụ ekwentị na-abịa na njedebe dị elu nke ika ahụ. Dị ka ọ dị na mbụ na nke gị, ọ ga - abụ njedebe dị elu yana ọnụ ahịa enwere ike ịnweta.
Enweghi oke nkọwa rue ugbu a. Echere ka iji Snapdragon 855 dị ka nhazi n'ime. Ọ dị ka igwefoto ga-abụ ike ọzọ nke ekwentị, mana anyị amabeghị ụdị njikọ ihe mmetụta ga-eji na ya. Agbanyeghi na aturu anya ato.
Enwere ọtụtụ ihe maka ọtụtụ ruo a ga-egosiputa Nubia Z20 na eze. Ekwentị na-arụ ọrụ nke ọma ma gosipụta ọganihu nke akara. Akara nke ndi mmadu na-adighi amara, ma hapuru anyi ihe kachasi nma, dika Alpha ma ọ bụ Red Ime Anwansi 3 n'ime afọ a.
Ya mere, anyị na-atụ anya ihe akara ndị China nwere iji ekwentị a kwuo. O yikarịrị ka n'ime izu ndị gara aga enwere mkpọtụ banyere Nubia NZ20, yabụ anyị ga-elebara anya nke ọma na leaks na ekwentị, ịmatakwu banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nubia Z20 enweela ụbọchị ngosi ngosi
Lerylọ Osisi Gaa nke Google bụ gallery ọhụrụ maka foto gị na ebumnuche na-adịghị n'ịntanetị
Iwu tupu maka Black Shark 2 Pro na Snapdragon 855 Plus amaliteworị